Davina Michelle mpandika teny manaraka ao amin'ny Eurovision Song Contest? Duncan Laurence mahita ny kandidà! : Martin Vrijland
Davina Michelle mpandika teny manaraka ao amin'ny Eurovision Song Contest? Duncan Laurence mahita ny kandidà!
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 27 May 2019	• 9 Comments
Araka ny voalazan'i Duncan Laurens, ny kintana vaovao Davina Michelle dia tokony handray anjara amin'ny Eurovision Song Contest amin'ny herintaona amin'ny anaran'i Holandy. I Davina dia mifarana amin'ny iray. "Eny sy izany?"Ary noho izany dia mety ho mpandika teny izy. Nanazava lahatsoratra maromaro aho (ohatra eto) ireo anarana izay mifarana amin'ny a matetika dia ampiharina amin'ny olona mpandika lalàna.
Efa nanatri-maso ny fampielezan-kevitra LGBTI izahay tao amin'ny Eurovision Song Contest nandritra ny taona faramparany. Tamin'ity taona ho an'ny Eurovision Song Contest ity dia toa tsy misy mpandray anjara tsotra izao.
Inona no tsy mety amin'izany? Tsy misy, ankoatra izay hoe toa manomboka an-jorom-bala ny heterosexual ary ny emancipation dia toa manaparitaka amin'ny fampielezan-keviny amin'ny vidin'ny lehilahy heterosexual. Ny fizarana ara-boajanahary ny lahy sy ny vavy dia toa tsy maintsy atao ambanin-javatra.
Noho izany, mpandray anjara amin'ny fifindra-monina amin'ny herintaona? Iray iray tsy misy volombava tamin'ity indray mitoraka ity ary tamin'ny feo vavy ihany koa. Azo atao izany izy rehetra. Tsy misy ratsy amin'izany, raha manontany ny olona Holandey ianao. Te-hanintona anao fotsiny ny fandaharam-potoanan'i Losifera izay mitoetra ao ambadik'izany. I Losifera dia mijoro ho avana (tontolo vaovao / tontolo vaovao), ny fiovan'ny lahy sy ny vavy (ny lahy / vavy). Ny fanindrahindrana ny transgender sy ny fanovàna avy amin'ny fenitra ara-nofo taloha ho an'ny LGBTI dia toa ny trano fidiovana ho an'ny fanovana manaraka: ny fiovàna manoloana ny transhuman. Olona ho toy ny Android misy nomerika atidoha en DNA ao amin'ny tambajotra 5G (ny aterineto ny zavatra izay ahafahanao ho iray amin'ireo zavatra ireo).
Afaka mihomehy ahy ankehitriny ianao ary maro no handroaka azy io ho fomba fiasa taloha tranainy na manavakavaka. Avelao mazava aho: tsy misy na inona na inona manohitra an'i Davina na manohitra ny olona izay manana firaisana ara-nofo. Ny olona tsirairay dia fanahy ary mitovy daholo isika rehetra. Noho izany dia tsy manavakavaka aho ary tsy izany no fomba fiasa. Te-hiresaka momba ny fandaharam-potoana izay azoko amboarina fotsiny aho. Ny fandaharam-potoan'ny lozam-piaron'i Losifera (ny aristokrasia sy ny Vatican, izay manosika ny kofehy ao ambadiky ny demokrasia rehetra).
Amin'ny alàlan'ny milina fampielezan-kevitr'izy ireo, io tilikambo fiambenana io dia mitory hatrany ny hafatra izay mitovy daholo. Io no tokony halefa. Ireo andevo rehetra tsy miankina amin'ny maha lahy na vavy dia ao anaty rafi-tserasera (5G) lehibe. Na izany aza, ny teny hoe "mitovy" dia midika hoe zavatra hafa tsy mitovy. Ny lehilahy dia samy hafa amin'ny vehivavy. Izany dia biolojia. Tsy mitovy ny mitovy. Na izany aza, ireo teny roa ireo dia mitovy amin'ny teny hafa ao amin'ny vaovao Orwelliana.
Mazava ho azy fa tsy afaka manaporofo aho fa i Davina dia mpandika teny ary raha tsy izany dia tsy tsara na ratsy, na mihoatra izany. Raha tsy izany dia manantena aho fa tsy tezitra izy. Tsy te hampahatezitra na iza na iza aho, fa manondro fotsiny ny fironana iray izay inoako fa tokony hotandremana.
Manahy aho ny amin'ny fisian'ny fampielezan-kevitra maro ho an'ny LGBTI sy (tamin'ny taona faramparany indrindra) ny fandaharam-potoana. Noho izany ny ahiahiko dia i Davina no ampiasaina amin'izany ary izany no antony nahatonga azy ho "nahita" ny mpihira Rosiana, dia nopihan'i Marco Borsato sy Armin van Buren ary efa navoakan'i Duncan Laurence ho kandida ho an'ny Eurovision manaraka. song festival. Fotoana iray ankoatra ny fandaharana amin'ny fahitalavitra rehetra izay efa nasehon'i Davina.
Noho izany dia mety hitory indray ny fandaharam-pianarana subliminal, izay hanomanana ny tanora amin'ny fenitra vaovao.
Singa tononkira iray avy amin'ny hira Skywards (tononkira), izay toa ny fahamarinana miafina manafina:
Mihinoa, matory ary azafady
Tsy miankina amin'ny lohalika
Misy izy bebe kokoa
'Mandra-pahatongan'ny vadin'ny mpanjaka
Hevero fa tena izy izy
Na dia hametaka ny fifanarahana aza ny hosoka
Manaova toerana ho azy
Na handao ny sakafo rehetra izy
'Mandra-pahoviana izy dia toy ny fanjaitra
Inona no tsy mety amin'ny fandaharam-potoana na ny fampielezan-kevitra? Tsy voatery hahita zavatra ratsy ianao. Ny hevitro anefa dia ny hoe miomana amin'ny fiovan'ny toetr'andro ny vahoaka. Noho izany dia zava-dehibe ny vatan'ny olombelona sy ny atidoha mihantona ao amin'ny rahona, ka tsy hoe ny atidoha ihany no mifandray amin'ny rafi-pitantanana, fa ny ADN ihany koa dia afaka ampifanarahana amin'ny Internet.
Noho izany dia mihevitra aho fa vonona amin'ny rafitra fanandevozana nomerika isika, fa mihevitra isika fa malalaka fotsiny ho an'ny tombontsoan'ny tanora eo amin'ny firaisana ara-nofo. Heverinao ve fa lavitra loatra ny tetezana? Rehefa tonga ny fotoana dia tsy azo havaozina ary tsy afaka manao na inona na inona intsony ianao. Omena anao fotsiny aho, tsy mikasa ny handratra ny olona na ny vondrona.
loharanom-baovao: sciencetimes.com, azlyrics.com
Tsy afaka nihira i Duncan ary nandalo ny fifaninanana Song of the Eurovision (LGBTI fampielezan-kevitra)
Tags: Davina Michelle, Duncan, Eurovision, Featured, kandidà, Laurens, song festival, transgender
27 May 2019 amin'ny 22: 00
Miverina indray ny lahatsoratra mazava tsara. Avy eo dia nizara avy hatrany tao amin'ny FB sy ny Twitter. Nefa moa va isika mifoha amin'ny ondry? Manompoa an'i Martin fotsiny.
28 May 2019 amin'ny 02: 48
Raha manana daty ianao amin'izao fotoana izao, dia manontany tena raha mitondra taratasy fanamarinam-piterahana izy ireo
28 May 2019 amin'ny 08: 08
Ny Fikambanana Iraisampirenena momba ny Fahasalamana dia nametraka laharam-pahamehana ny fitsipika momba ny fanalefahana ny aretina amin'izao fotoana izao, manampy ny fanimbana sy ny fiankinan-doha amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny aretina ary manala ny transagénerisme amin'ny hetsika politika ara-politika.
... ary mandritra ny fotoana fohy
Ny "tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy", etsy ankilany, dia nesorina tao amin'ny sokajin'ny fahasalamana ara-tsaina tanteraka, nanjary "toe-piainana mifandraika amin'ny fahasalamana ara-pananahana." Ny famaritana ny WHO dia miorina kokoa noho ny firenena sasany "-" ny fitondrantena sy ny preferences fototra ho an'ny famaritana ny diagôsia, "dia mivaky toy izao ny ICD-11, izay midika fa tsy azo ampiharina amin'ny zatovo izy io alohan'ny fahamaotiana ary ny olona manelanelana dia mitazam-potsiny momba ny fiteny noraisina any an-toeran-kafa ao amin'ilay antontan-taratasy, izay manondro ireo fiovan'ny toetrandro" fampandrosoana. "
28 May 2019 amin'ny 17: 14
Manampy koa ny fandaharam-potoana fanodinana. Ny tanana miafina, ohatra, dia nahatonga ny fiaraha-monina ho feno izay rehetra mifanaraka amin'izany! Ny zava-drehetra ao anaty rafitra iray ataon'ny fianakaviana dia manimba ny olombelona biolojika! Ireo izay mahafantatra ny fandaharam-potoana dia tsy maintsy manontany tena ny tenany hoe te ho faty izy ireo! Amin'ny voninahitra sy ny feon'ny fieritreretana, na amin'ny maha-andevo ara-toekarena azy ary amin'ny cyborg sy ny mpilalao matihanina! Ireo fianakaviana izay miezaka ny ho ambony dia tsy mamela ny maha-sisa tavela (na ny mbola tsy maintsy anananao) safidy! Amin'ny fotoana handalovany dia handrava ny zava-drehetra izy ireo ary handrava izay mbola hijanona eo amin'ny làlany!
29 May 2019 amin'ny 12: 36
Ho an'izay rehetra milaza hoe: "Eny, fa tsy mahita ny poma an'i Adama aho"
29 May 2019 amin'ny 12: 42
29 May 2019 amin'ny 12: 44
Ny scan CT anao dia tafiditra ao amin'ny fitsaboana ataonao amin'ny ADAM. Tena ilaina ity scan ity satria io no hany fomba ahafantarantsika hoe ahoana no ifehezana ny tadim-peo mifandraika amin'ny cartilage.
29 May 2019 amin'ny 12: 45
12 Septambra 2019 ao amin'ny 17: 33
Ny tsy mety koa dia ny fanavaozana sy ny toro-hevitra sy ny hormonina iray manontolo no tambin'ny fiantohana ara-pahasalamana, fa tsy izany, ohatra, ny mpitsabo nify na ny fitsaboana. Ary raha amin'ny maha vehivavy anao dia tsy misy famoronana nono ary maniry ny fampitomboana ny tratrany - na inona na fahasalamana dia tsy mahazo valisoa ianao fa ny lehilahy te hiova no manao izany. Tao amin'ny tranokala iray no hitako fa mbola mitokana ny tratrany mandritra ny fandidiana nono ho an'ny lehilahy niova fo. Tsy afaka mahita azy tsara. Angamba rehefa eo amin'ny pleeboy izy.
Na izany na tsy izany, tsy azoko hoe te hitelina hormonina ianao avelao hanapaka mandritra ny salama ary hita fa mahazatra izany. Eny, mahasalama amin'ny marika fiadiana. Mandritra izany fotoana izany, ireo hormonina artifisialy ireo dia manimba ny fahasalamanao manontolo. Hevero fa ho ela velona kokoa izy ireo, miaraka amin'ny homamiadana ambony kokoa.
« Ny valim-pifidianana nasionaly amin'ny volana 4 avy any an-kavia mankany ankavia any Timmermans? Mifidy ireo mpifidy!
Michael P. Thijs H. Jos B. ny tranga rehetra momba ny famonoana ny media dia mitarika amin'ny fampidirana haingana ny lalàna henjana izay mahakasika ny tsirairay »
Total visits: 13.120.679
Martin Vrijland op Ny PsyOp 'fanam-pinoana lalina' noho ny nanesoranao ny fahafahanao sy ny fampidirana 'polisy' eritreritra (part 2)
ZalmInBlik op Ny PsyOp 'fanam-pinoana lalina' noho ny nanesoranao ny fahafahanao sy ny fampidirana 'polisy' eritreritra (part 2)
Mifandraisa anjara amin'ny 1.652 hafa